अमेरिकालाई उत्तर कोरियाले फेरि दियो यस्तो चेतावनी | Rajmarga
अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू जारी राखेमा आफ्नो मुलुकले निरस्त्रीकरण नगर्ने उत्तर कोरियाका विदेशमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रि यङ-होले प्रतिबन्धहरूले अमेरिकाप्रतिको उत्तर कोरियाको ‘अविश्वासलाई गहिरो बनाउँदै लगेको’ बताए।
प्योङयाङले प्रतिबन्धहरू हटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकालाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। र, त्यसमा उसले रुस र चीनको समर्थन पनि प्राप्त गरिसकेको छ। तर ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ उत्तर कोरियाले निरस्त्रीकरण नगरेसम्म प्रतिबन्धहरू यथावत रहने बताउँदै आएको छ।
गत जुनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले किम जङ-अनसँग ऐतिहासिक शिखर बैठक गरेका थिए र जहाँ किमले पारमाणविक निरस्त्रीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर त्यो दिशामा ठोस प्रगति चाहिँ नगन्य मात्रै भएको बताइन्छ।
के भने रिले?
महासभामा बोल्दै विदेशमन्त्री रिले ‘पहिला निरस्त्रीकरण गर्नुपर्ने नीति’मा अमेरिकाले जोड दिइरहेकोले ‘प्रतिबन्धको स्तर बढेको’ बताए।
“पछिल्लो गतिरोध अमेरिकाको बलपूर्वक कदमका कारण देखिएको हो जुन विश्वासको वातावरणका लागि घातक छ।”
“अमेरिकामाथि विश्वास नहुञ्जेल हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा विश्वस्त हुन सकिँदैन र त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले पहिला निरस्त्रीकरण गर्ने कुरा हुँदैन।”
रिले थपे, “प्रतिबन्धहरूले हामीलाई घुँडा टेकाउन सक्छ भन्ने कुरा ती मानिसहरूको भ्रम हो, जो हामीसँग परिचित छैनन्।”
शिखर बैठकयता के के भयो?
शिखर बैठकमा भएको सहमतिमा उत्तर कोरियाले निरस्त्रीकरणका काम गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि समयसीमा, विस्तृत विवरण वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको संयन्त्रबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
गत अगष्टमा ट्रम्पले उत्तर कोरियाको साझेदार चीनले अमेरिकासँगको व्यापार विवादका कारण निरस्त्रीकरसम्बन्धी प्रगतिलाई कमजोर तुल्याइरहेको आरोप लगाएका थिए।
यद्यपि यसै महिनाको शुरूतिर दक्षिण कोरियाली नेता मून जे-इनले प्योङयाङको तीन दिने उच्चस्तरीय भ्रमण गरे, जुन दक्षिण कोरियाली नेताबाट गरिएको एक दशकयताकै पहिलो भ्रमण थियो।
मूनले ‘निरस्त्रीकरणप्रति अध्यक्ष किमको ठोस प्रतिबद्धतालाई आफूले पुष्टि गराउन सकेको’ बताएका थिए। ट्रम्पलाई किमले छिट्टै भेट्न चाहेको पनि मूनले उल्लेख गरेका थिए।
किमले पनि उत्तर कोरियाको प्रमुख क्षेप्यास्त्र परीक्षण केन्द्र र प्रक्षेपण क्षेत्र बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
र, अमेरिकाले त्यसको बदलामा आफ्नो तर्फबाट पनि केही कदम चालेमा आफ्नो प्रमुख पारमाणविक परीक्षण स्थल पनि बन्द गर्न सक्ने किमले बताएका छन्। केही दिनअघि मात्रै ट्रम्पले किमसँगको दोस्रो शिखर बैठक ‘अब धेरै टाढा नरहेको’ बताएका थिए। बीबीसी नेपाली सेवाबाट
Previous post: जापानमा आँधी, ५० घाइते, जनजीवन प्रभावित
Next post: निर्मलाका बा–आमाले भने, ‘पहिल्यै प्रमाण नष्ट गरेर, आँखामा छारो हालियो’
के कांग्रेसले डा. केसीका मागलाई उपयोग गर्न खोज्दैछ ?